गुल्मीमा दशौँ राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न : त्रिभुवन माबि भुवाचिदी प्रथम ! – ebaglung.com
गुल्मीमा दशौँ राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न : त्रिभुवन माबि भुवाचिदी प्रथम !
२०७६ असार २४, मंगलवार १९:३६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
मनु सुनार, गुल्मी २०७६ असार २४ । गुल्मीमा दशौँ राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । यहि असार २२ गतेदेखि सदरमुकाम तम्घासमा शुरु भएको प्रतियोगितामा जिल्लाका विभिन्न २० वटा बिद्यालयहरुले भाग लिएका थिए । प्रतियोगिताबाट पन्ध्र वटा गोल्ड मेडल प्राप्त गदै त्रिभुवन माध्यमिक बिद्यालय मुसिकोट नगरपालिका भुवाचिँदी प्रथम भएको छ ।
रुन्खादह माध्यामिक बिद्यालय गुल्मीदबार गाउँपालिकाले आठ वटा मेडल सहित द्धितिय भएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख डिल्ली विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
महेन्द्र नमुना माध्यामिक बिद्यालय रेसुङ्गा नगरपालिका तम्घासले पाँच वटा गोल्ड मेडल प्राप्त गदै तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको उनले बताए । भलिबल,कबड््डी,एथ्लेटिक्स,उफ्रने र फ्याँक्ने तर्फ हाइजम्प,लङजम्प,त्रिपलजम्प,ज्याभलिङ–थ्रो,मार्सल आर्ट,तेक्वान्दो लगायतका प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताबाट विभिन्न विधाहरुमा ८६ जना विद्यार्थीहरु छनौट भएका कार्यालय प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिए । छनौट भएका खेलाडीहरु यहि असार २५ गतेदेखी शुरु हुने पाँच नम्बर प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगितामा भाग लिन पाल्पा पुगेका छन् ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले गुल्मीले पछिल्लो समय खेल क्षेत्रबाट आफुलाई उचाईमा पु¥र्याएको बताए । ‘गुल्मी जिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडी स्वर्गीय दल बहादुर रानाको जिल्ला पनि हो ।’ गुल्मीका खेलाडीहरुले राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरुबाट गोल्ड मेडल दिलाउन सफल भएको भण्डारीले बताए।
‘अहिले स्थानीयतहले पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।’ उनले भने ‘यो पनि खेल क्षेत्रको विकास लागि इट्टा थप्ने काम हो ।’ यसले खेलाडीहरुलाई थप उर्जा मिलेको उल्लेख गरे । प्रतियोगितामा बिद्यार्थीहरु निकै उत्सुक्ताका साथ सहभागी भएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ ।
नौघरटोलका बासिन्दा दाहसंस्कार स्थल नहुँदा खेतबारीका कुनामा शव गाड्न बाध्य !